Bible: gini bu nmekorita nke Nna na Okpara? | Ahụrụ m Jizọs n'anya
di Paolo Tescione - Jenụwarị 3, 2021
Iji tụlee mmekọrịta dị n’etiti Jizọs na Nna ahụ, ebu ụzọ lekwasị anya n’Oziọma Jọn, ebe ọ bụ na amụwo m akwụkwọ ahụ n’ime afọ iri atọ ma burukwa ya n’isi. Edere m ugboro ole Jizọs kwuru banyere Nna, ma ọ bụ mgbe John zoro aka na mmekọrịta dị n'etiti ha na akaụntụ ya: Achọtala m amaokwu 95, mana echere m na atụfuru m ụfọdụ. Iji mee nke a, achọpụtara m na Oziọma Synoptic atọ ahụ kwuru banyere mmekọrịta a naanị ugboro 12 n'etiti ha.
Ọdịdị nke Atọ n'Ime Otu na nghọta anyị kpuchiri ekpuchi
Ebe ọ bụ na Akwụkwọ Nsọ anaghị ekewapụ Nna ahụ na Ọkpara ya na Mmụọ Nsọ, anyị ga-akpachara anya. Tupu anyị atụlee otú Ọkpara ahụ si metụta Nna ahụ, ọ dị anyị mkpa ịtụle ozizi nke Atọ n’Ime Otu, mmadụ atọ nke Chi: Chineke Nna, Chineke Ọkpara na Chineke Mmụọ. Anyị enweghị ike ikwurịta ha abụọ na-ekwetaghị onye nke atọ. Ka anyi gbalịa iche n'echiche otu Atọ n'Ime Otu: ọ dịghị oge ma ọ bụ ohere dị n'etiti ha ma ọ bụ n'etiti ha. Ha na-agagharị na nkwekọrịta zuru oke n'echiche, uche, ọrụ na nzube. Ha na-eche echiche ma na-eme omume n'ụzọ zuru oke na-enweghị nkewa. Anyị enweghị ike ịkọwa njikọ a n'ụzọ doro anya. St. Augustine gosipụtara ịdị n'otu a site na iji okwu ahụ bụ "ihe dị mkpa", "Na Ọkpara ahụ bụ nnọọ Chineke nke otu ihe ahụ na Nna ahụ. E kwuru na ọ bụghị naanị Nna ahụ bụ Atọ n’Ime Otu adịghị anwụ anwụ. Ihe niile esiteghi na Nna, mana sitere na Ọkpara. Na Mmụọ Nsọ bụ Chineke n’ezie, nhata Nna na Ọkpara ”(On the Trinity, Loc 562).
Ihe omimi nke Atọ n’Ime Otu na-egosi na ọ gaghị ekwe omume na uche mmadụ nwere oke nyocha. Ndị Kraịst na-efe mmadụ atọ ahụ dịka otu Chukwu na otu Chukwu dị atọ. Thomas Oden dere, sị: "unitydị n'otu nke Chineke abụghị ịdị n'otu nke akụkụ ndị a na - ekewa ekebi ma [nke] nke ndị mmadụ dị iche" (Systematic Theology, Mpịakọta nke Mbụ: Chineke Dị Ndụ 215).
Ikwu banyere ịdị n'otu nke Chineke na-emetụta echiche mmadụ. Anyị na-etinye mgbagha ma gbalịa kewaa nkewa ahụ. Anyị na-anwa ịhazi mmadụ atọ n'ime Chi, na-enye ọrụ dị mkpa nke otu onye karịa nke ọzọ. Anyị chọrọ ịkọwa ma jikwaa Atọ n'Ime Otu dị ka atụmatụ mmadụ si dị. Agbanyeghị, mgbe anyị mere nke a, anyị na-agọnahụ ọdịdị nke Chineke dịka ekpughere ya n'Akwụkwọ Nsọ ma gbanahụ eziokwu ahụ. Nkwekorita nke ihe ato ato puru ighota dika ihe nke mmadu. Jizọs gbara akaebe na ịdị n'otu a mgbe ọ na-ekwupụta, "Mụ na Nna m bụ otu" (Jọn 10:30). Mgbe Filip gbara Jizọs ume “gosi anyị Nna ahụ, o zuwokwara anyị” (Jọn 14: 8), Jizọs baara ya mba, sị: “Anọnyeere m gị ruo ogologo oge ma ị maghị m, Filip? Onye ọ bụla hụrụ m ahụwo Nna m. Olee otu ị ga-esi sị, “Gosi anyị Nna ahụ”? Don'tnu ekweghi na Mu onwem nọ nime Nnam, Nnam nọ kwa nimem? Okwu Mu onwem nāgwa unu ekwughi m n'Onwem; kama Nnam Nke n inbi nimem nālu ọlu-Ya. Kwere m na m nọ na Nna, Nna nọkwa na m, ma ọ bụ kwenye n'ihi ọrụ ndị a n'onwe ha ”(Jọn 14: 9-11).
Filip enwegh uche nke okwu Jisos, banyere nha anya ya na Chi. “N’ihi na ọ bụ n’echiche ahụ, dị ka a ga-asị na Nna ahụ ka Ọkpara ya mma n’ụzọ ụfọdụ, na Filip nwere ọchịchọ ịmata Nna ahụ: ya mere ọ maghịdị Ọkpara ahụ, n’ihi na o kwenyere na ọ dị ala karịa onye ọzọ. Ọ bụ iji dozie echiche a na a sịrị: Onye na-ahụ m na-ahụkwa Nna ”(Augustine, The Tractates on the Gospel of John, loc. 10515).
Anyị, dịka Filip, na-eche maka Atọ n'Ime Otu dị ka ndị isi, na Nna dị ka onye kachasị ukwuu, mgbe ahụ Ọkpara na mgbe ahụ Mmụọ. Kaosinadị, Atọ n’Ime Otu dị ka ihe a na-apụghị ịkekọrịta, mmadụ atọ hà nhata. Nkwenkwe Athanasian na-agba akaebe banyere ozizi Atọ n’Ime Otu: “N’ime Atọ n’Ime Otu a, ọ dịghị onye dị tupu ma ọ bụ onye ọzọ; ọdịghị onye dị ukwuu ma-ọbụ onye dị ala karịa ibe ya; ma mmadụ atọ a na-adị ndụ ebighị ebi na ibe ha ma hara nhata n'ihi na n'ihe niile… Atọ n'Ime Otu na Unitydị n'Otu na Atọ n'Ime Otu ka a ga-efe ofufe. Ya mere, onye obula choro ka azoputa ya aghaghi iche banyere Ato n’Ime Otu n’otu uzo. "(Okwukwe nke Athanasius na Concordia: Nkwupụta Lutheran, Akwụkwọ Ndị Na-agụ Akwụkwọ nke Akwụkwọ nke Concord, peeji nke 17).
Kraist biara na oru nke nzoputa
Jizọs gosipụtara ịdị n'otu a na ọrụ ya na nzọpụta na John 14: 6 mgbe ọ na-asị, "Abụ m ụzọ, eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye na-abịakwute Nna ma ewezuga site na m “. Fọdụ ndị na-akatọ okwukwe Ndị Kraịst na-egosipụta okwu ndị a nke Jizọs ma na-eti mkpu ka ihere. Ha katọrọ anyị n’ihi na anyị siri ọnwụ na ọ bụ naanị Jizọs ka a ga-esi nweta nzọpụta ma ọ bụ nnwekọ na Chineke.Ma, amaokwu a kwuru na ọ bụ naanị site n’Ọkpara ahụ ka mmadụ ga-esi mata Nna ahụ. Anyị na-atụkwasị obi na onye ogbugbo zuru oke dị nsọ n’etiti anyị na Chineke dị nsọ. Jizọs agọnarị ihe ọmụma banyere Nna ahụ dịka ụfọdụ chere. Naanị ihe ọ na-ekwu bụ na ndị na-atụkwasịghị obi na ịdị n'otu Ya na Nna ahụ kpuru ìsì n'eziokwu nke Chineke bụ Nna, Ọkpara na Mmụọ Nsọ. Jizọs bịara n’ụwa ịkpọsa Nna ya, ya bụ, ime ka a mata ya. John 1:18 ọdọhọ ete: “Akananam baba owo kiet ikwe Abasi; naanị Chineke, onye nọ n'akụkụ Nna, emeela ka ọ mara “.
N’ihi nzọpụta, Ọkpara Chineke nwere afọ ojuju ịbịa n’ụwa iburu mmehie nke ụwa dum n’onwe ya. N'ime ọrụ a, e kewaghị uche na nzube Chineke n'etiti Nna na Ọkpara, mana Ọkpara na Nna ahụ mere ya. Jizọs sịrị, “Nna m na-arụ ọrụ rue ugbu a, Mụ onwe m na-arụkwa ọrụ” (Jọn 5:17). N’ebe a Jisos kwadoro oru ebighebi Ya n’iru dika Sonkpara nke Chineke nke putara n’onye. O weputara izu oke nke Chineke choro maka nkwekorita ya na mmadu. Ọdịdị mmehie nke mmadụ na-egbochi anyị iru izu-oke ahụ na-enweghị Kraịst. Ya mere, ebe “mmadu nile emehiewo, we ghara iru ebube Chineke” (Ndi Rom 3:23), odighi onye obula azoputara site na mgbali nke aka ya. Jizọs, Nwa nke mmadụ, biri ndụ zuru oke n'ihu Chineke n'ihi anyị ma nwụọ ka ọ bụrụ mkpuchi mmehie maka mmehie anyị. Ọkpara Chineke “wedara onwe ya ala site na irubere isi rue ọnwu, ọbụnadị ọnwụ n’elu obe” (Ndị Filipaị 2: 8) ka anyị wee bụrụ ndị ziri ezi site n’amara ya, gbapụta ma mee ka anyị na Chineke dị na mma.
Chineke zitere Jizọs ka ọ ghọọ ohu ahụ na-ata ahụhụ. Maka nwa oge, Okpara Chineke, onye esite n’aka ya mee ihe nile, bu “onye pere mpe kari ndi-mo-ozi” (Abuoma 8: 5), ka “azoputa uwa site na ya” (Jọn 3:17). Anyị na-akwado ikike nke Kraịst mgbe anyị na-ekwupụta n'okwukwe Athanasian: "Ya mere, ọ bụ ezi okwukwe anyị kwenyere ma kwupụta na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, Ọkpara Chineke, bụ ma Chineke ma mmadụ. Obu Chineke sitere na nkpuru nke Nna tutu oge nile: O bu kwa madu, amuru site na ihe nke nne ya n’uwa a: Chineke zuru oke ma buru nwoke zuru oke, nke nkpuru obi ezi uche di na ya na aru mmadu; hà nhata Nna ya n'ihe banyere chi ya, dị ala karịa Nna n'ihe gbasara mmadụ. Ọ bụ ezie na ọ bụ Chineke na mmadụ, ọ bụghị ya abụọ, kama ọ bụ otu Kraịst: otu, otu o sila dị, ọ bụghị maka ntụgharị nke chi dị ka anụ arụ, kama ọ bụ maka echiche nke mmadụ ịbụ Chineke; nke kachasị, ọ bụghị site na mgbagwoju anya nke ihe, kama site na ịdị n'otu nke mmadụ "(Creed of Athanasius).
Dị n’otu nke Chineke pụtara ìhè n’ọrụ nzọpụta, n’ụzọ na-emegide onwe ya, ebe ọ bụ na Jizọs dị ka ọ na-egosi ọdịiche dị n’etiti Ọkpara Chineke na Nwa nke mmadụ mgbe ọ sịrị: “Ọ dịghị onye pụrụ ịbịakwute m ọ gwụla ma Nna m nwere m zitere gi adighi adọta ya ”(John 6:44). N’ebe a, Jizọs kwuru maka ịdabere n’ebe Nna ya nọ ka ọ na-ebu ụdị na-esighị ike nke ohu ahụ na-ata ahụhụ. Mbilite nke Kraist anaghị anapụ Ya ike Ya dị nsọ mgbe Ọ dị umeala: “Mụ onwe m, mgbe eweli m n’elu ụwa, aga m adọta mmadụ niile n’ebe m nọ” (Jọn 12:32). O gosiputara ikike nke elu-igwe ya inye “ndu onye obula ochoro” (Jon 5:21).
Ime ihe a na-adịghị ahụ anya
Ikewa di iche iche di iche iche na-ebelata nbido nke Kraist: Okpara Chineke putara ihe wee bia biri n’etiti anyi ka o wee mee ka Nna anyi adighi ahu anya. Onye edemede nke Akwụkwọ Ndị Hibru na-ebuli Kraịst dị adị elu mgbe ọ na-akpọsa Ọkpara ahụ, “ọ bụ ịma mma nke ebube Chineke na ụdị akara aka okike ya, ma jiri okwu nke ike ya na-akwado eluigwe na ala. Mgbe o mechara sachapụ mmehie, ọ nọdụrụ n'aka nri nke Onye Ọchịchị dị n'elu. "(Ndị Hibru 1: 3)
St. hụrụ "(Augustine, Akwụkwọ ndị e dere na Oziọma Jọn, mpaghara 10488)
Ozizi Nicene na-agba akaebe na nkwenkwe a bụ isi na ndị Kraịst na-ekwenye ịdị n'otu nke Chi na mkpughe nke Nna site n'aka Ọkpara ahụ mgbe anyị na-ekwupụta:
"Ekweere m n'otu Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, otu Ọkpara Chineke mụrụ naanị ya, onye amụrụ site na Nna ya tupu ụwa niile, Chineke nke Chineke, Ìhè nke Ìhè, ezi Chineke nke Chineke n'onwe ya, amụrụ, emeghị ya, inwe otu ihe. di na Nna, Onye esitere n'aka Ya me ihe nile; onye maka anyị bụ ụmụ nwoke na nzọpụta anyị siri n’eluigwe gbadata wee bụrụ mmadụ n’ime mmụọ nsọ nke nwa agbọghọ na-amaghị nwoke bụ Meri wee bụrụ mmadụ “.
Na-atụgharị uche n'ụzọ ziri ezi banyere Atọ n'Ime Otu
Anyị kwesịrị iji ụjọ na nkwanye ùgwù gakwuru Atọ n'Ime Otu mgbe niile, anyị kwesịrị izere ịkọ nkọ na-enweghị isi. Ndị Kraịst na-a rejoiceụrị ọ inụ n'ime Kraịst dịka naanị ụzọ Nna. Jisos Kraist Nwoke-Chineke nekpughe Nna ka ewe zoputa anyi ma birikwa ebighebi na a joyuri na idi n’otu Chukwu. Jizọs na-emesi anyị obi ike banyere ọnọdụ anyị n’ime Ya mgbe ọ na-ekpe ekpere maka ndị na-eso ụzọ ya niile, ọ bụghị naanị mmadụ iri na abụọ ahụ, “Ebube ahụ i nyere m ka m nyere ha, ka ha wee bụrụ otu dịka anyị bụ otu, m nọ n’ime ha na ị dị n’ime m, ka ha wee bụrụ otu zuru oke, ka ụwa wee mara na ị zitere m, na ị hụrụ ha n’anya dịka ị hụrụ m n’anya ”(Jọn 17: 22-23). Anyị na Atọ n’Ime Otu dị n’otu site n’ịhụnanya na ịchụ-aja nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst.
“Ya mere, ọ bụ ezi okwukwe anyị kwenyere ma kwupụta na Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, bụ Ọkpara Chineke, bụ ma Chineke ma mmadụ n’otu oge. Ya onwe ya bu Chineke, onye esitere na ihe nke Nna puta tutu oge nile: O buru kwa nwoke, amuru site na nkpuru nke nne ya n’oge a: Chineke zuru oke na nwoke zuru oke, nke nkpuru obi ezi uche di na ya na aru nke madu mejuputara; hà nhata Nna ya n'ihe banyere chi ya, dị ala karịa Nna n'ihe gbasara mmadụ. Ọ bụ ezie na ọ bụ Chineke na mmadụ, ọ bụghị ya abụọ, kama ọ bụ otu Kraịst: otu, otu o sila dị, ọ bụghị maka ntụgharị nke chi dị ka anụ arụ, kama ọ bụ maka echiche nke mmadụ ịbụ Chineke; nke kachasị, ọ bụghị site na mgbagwoju anya nke ihe, kama site na ịdị n'otu nke mmadụ "(Creed of Athanasius).